I-Bedspread-HF29011 ehonjiswe ngentambo yamandulo, i-China Bedspread-HF29011 enentambo yamandulo ehonjisiweyo Abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe ekhaya textile Co.,Ltd
Inani Model: HF29011
Le seti ye-coverlet kulula kakhulu ukuyinyamekela. Ingumatshini ohlambekayo emanzini abandayo anemibala efanayo. I-Tumble yomile kubushushu obuphantsi. Musa ukwenza iblitshi – Akukho Mfi – Akukho Ukushwabana!! Yakhelwe ukuhlala ixesha elide kakhulu ukuba igcinwe ngokufanelekileyo.Iphelele kubantwana abanezilwanyana zasekhaya kunye nabantwana, ilaphu elichasayo kunye neenwele zesilwanyana aziyi kunamathela kuyo. Izinto ezikumgangatho ophezulu zipilisi kunye nokumelana nokuphelelwa amandla, akufihli ngokuhlamba.